Lugood in Nexus 7: Sida loo Play Lugood Music on Nexus 7
> Resource > Beddelaan > Sida loo Play Lugood Music on Nexus 7
Haddii aad heshay Google Nexus 7 kiniin ah oo iibsaday badan oo music Lugood, waxaa dhici karta inaad doonayaa inaan ciyaaro, kuwaas oo iibsaday music Lugood on Nexus 7. Haa, waa baahida weyn ee suuqa. Laakiin dhibaatadu waxay tahay inta badan music Lugood (sida M4A, AAC iwm) waxaa ilaaliya technology maamulka xuquuqda digital. Waxaa loola jeedaa si toos ah aan kuu soo gudbin karaa music Lugood in Nexus 7 loo maqli karo. Maqaalkani waxa uu idin tusiyo habka ugu fudud ee uu u ciyaaro iibsaday music Lugood on Nexus 7 oo aan wax khasaare ah oo tayo leh maqal ah.
Habka waa in la isticmaalo Wondershare Video Converter . Waxa aad provideds la mid click xal ka yimid music Lugood saarto ilaalinta DRM, si aad u dhegaysan kartaa Lugood music waqti kasta iyo meel kasta oo ay saarnaayeen ku dhawaad ​​qalabka la qaadi karo. Hawlgalka ayaa dhan waa mid aad u fudud maydhan biyaha, kaliya saddex tallaabo oo fudud.
1 dar files music Lugood in music Lugood ay u Nexus 7 Converter
In interface ugu weyn this app ee aad, riixi kartaa batoonka. Suuqa ayaa soo socda aad u horseedi doonaa in ay helaan files music Lugood kombiyuutarka. Markaas, keeno files music Lugood aad rabto in aad ka ciyaaro Nexus 7. ​​Hadda, aad arki doonaa oo dhan files audio daray muujiyay sida soo socota.
Haddii kale, waxaad isticmaali kartaa hab kale oo ku shuban faylasha aad music Lugood. Si toos ah la furo gal ah in ka kooban yahay files xaafaddaada Lugood music, ka dibna si toos ah kuwaa oo si Murayaad this app ee.
Sida la og yahay in dhan, MP3 waa qaab socon u Nexus 7. Sidaas halkan, waxaad dooran kartaa MP3 format sida wax soo saarka. Si aad u sameyso, waxaad riix icon format in guddi Output Qaabka ah, oo ka dibna tag "qaab"> "Audio"> "MP3".
Ama waxaad dooran kartaa qaab filaayo in Nexus 7. In liiska saarka qaabka, tag "Device" category halkii ka mid ah "Qaabka" category. Markaas doorato qalabka Nexus 7 ka yar "kuwa kale"-category sub.
3 Transfer Lugood music in Nexus 7
Riix ah "Beddelaan" button rukun-xaq u hooseysa oo ka mid ah tan app 's interface ugu weyn. Barnaamijkan wuxuu bilaabi doonaa ka saareen ilaalinta DRM ka Lugood files audio ee hal mar. Marka uu sameeyo, waxaad ka heli kartaa kuwan DRM-free files audio galka wax soo saarka ay dilaan "Open Folder".
Hadda, furaysto aad Nexus 7 galay computer ka, ka dibna lagu wareejiyo kuwan Lugood Non-DRM music aad Nexus 7 madadaalada on go ah.
Qaab Super la NVIDIA® CUDA